Ama-wipe ethu e-ESD akhiqizwa nge-antistatic polyester nezinto zekhabhoni eziyinayoni eyakhiwe ngendlela eyingqayizivele, engasebenzi. Iphansi kakhulu ekukhiqizweni kwezinhlayiyana namakhemikhali akhishwayo, ama-wiper akhethiwe acutshungulwa ngokukhethekile futhi afakwa ku-Class 100 / ISO 5 izindlu zangasese zokuhlanzeka okuhle nokuhlanzeka kwempahla.
Igumbi elihlanzekile le-Polyester ne-Foam ikhanda le-Swabs
I-Cleanroom Swab yakhiwe ngendwangu ye-polyester engqimba ephindwe kabili engenazo izinto ezingcolisayo ezifana ne-silicone, amides noma
Indwangu iboshelwe i-thermally kusibambo, ngakho-ke, kuqeda ukusetshenziswa kokunamathisela noma okokugqoka okungcolisayo.
Iphepha lethu elikhethekile elingenalutho lisebenzisa izinto zokuqinisa ukuhlanganisa nephepha ngendlela ethile ukufeza injongo yokuqinisa iphepha elisebenzayo. Inokumelana nezinyembezi okuphezulu ngokwedlulele, amandla okuqina nokuqina okuphezulu. I-lint ephansi kakhulu.
Isikhwama sephepha lokuvikela imvelo
Okuphrintekayo, Ukuthenga Okuphinda Kusebenze okungu-100% nezikhwama zokupha / zokupha, i-Plastic Free, i-Eco Friendly, Izikhwama ezilahlwayo ze-Bio. Indwangu ethambile futhi egqokekayo, enethezekile futhi ehlala isikhathi eside, isikhwama sephepha
Iphepha likawoyela lokudla
Iphepha elimunca uwoyela.Iphepha likawoyela lokudla
Iphepha elimunca uwoyela nephepha likawoyela lokudla liyiphepha lokubhaka elisetshenziswa kakhulu nephepha lokugoqa ukudla, elinokumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nomswakama, izici zokumelana namafutha. Ukusetshenziswa kwephepha likawoyela abicah kungavimbela ngempumelelo ukudla ekunamatheleni ekudleni okuqediwe futhi kukwenze kubukeke kukuhle ngokwengeziwe.
Okubalulekile: kwenziwa ngopulpulu wokhuni oluhlaza ongaphakeme, owenziwe ngezinqubo eziqinile zokukhiqiza zokudla, ngokusebenza obala okuhle, amandla, ubushelelezi, ukumelana nowoyela
Isisindo: 22G. 32G. 40G. 45G. 60G
Isikhwama semishini yokupakisha yasekhaya
Iphepha lethu elikhethekile elingenathuli lisebenzisa izinto zokuqinisa ukuhlanganisa nephepha ngendlela ethile ukufeza inhloso yokuqinisa iphepha elisebenzayo. Inokumelana nezinyembezi okuphezulu ngokwedlulele, amandla okuqina nokuqina okuphezulu. I-lint ephansi kakhulu.
Isichibi se-polyester cleanroom
I-1009 isula yonke inhloso eyenziwe nge-polyester e-intambo eqhubekayo eyi-100% ngendlela ephothiwe kabili, engekho-run, nephethini ehlanganisiwe. Ithambile futhi ayinakulimaza, ilungele izindawo ezibucayi lapho kubalulekile khona ukulawula ukungcoliswa.
Isichibi se-Sub Microfiber Cleanroom
Indwangu yamahhala ye-Sub microfiber lint, enephethini elikhethekile elukiwe elenza ukubamba uketshezi nokungcola. Isakhiwo esihlukile sendwangu sinika amandla okubamba ukungcola okuhle kakhulu. Ukusula okuqinile okusiza ukususa ukungcola okunenkani, ukubamba izinhlayiya zesihlabathi nokunikeza umthelela owesabekayo ekwesuleni. Isiphetho esikhethekile se-wicky sivumela ukumuncwa okulula kwama-solvents. Lawa ma-wipe wamahhala anzima futhi awelula. Amandla okuqina endwangu aphezulu kakhulu.
Isisuli seMicrofiber Cleanroom
Uthuli lwamahhala lwe-micro-fiber indwangu selukiwe nge-100% ephelele eqhubekayo ye-micro-fiber, izinhlangothi ezine zendwangu yokusula yamukelwa i-laser noma i-ultrasonic evaliwe yobuchwepheshe obunqenqemeni, ivimbela ngokweqile ukuwa kwefayibha nokukhiqizwa kothuli oluncane.
I-LCD sula umqulu
Le Tape Roll Wiper kuyindlela engcono kakhulu yokuhlanza i-TFT-LCD, ibhethri leLithium okwamanje.
Its me-aterial: i-100% i-fiber enhle ne-intension ephezulu ye-polyester fiber ( 30% polyamide 70% polyester microfiber noma I-polyester engu-100%) okucishe kunganqamukeki futhi kungenalutho, ukuthungwa: plain / twill.
I-Lint Mahhala M 3 Wipes
Ubuso bomkhiqizo bunesakhiwo esifana nomgodi, esisetshenziselwa kakhulu ukusula ubuso bezinto ezinemba; uthuli oluphansi, umphumela omuhle wokusula, umthamo omkhulu wokugcina amanzi, uthambile futhi umsulwa. Ama-Chemical agents afana nokumelana ne-acid ne-alkali. Uthuli oluphansi kanye ne-anti-static, lungalawula ngempumelelo inani likagesi omile owenziwe. Ingasetshenziswa kaningi. isetshenziswa kabanzi embonini ye-elekthronikhi. Ingasetshenziswa futhi njengokusula kwendawo yonke ukuhlanzwa nsuku zonke.
AmaWiper Wemboni Emhlophe
Yenziwe ngomuthi wokhuni nefayibha, efanelekile ukusulwa ngamandla ahlukahlukene; alukho uthuli loboya olusele ngemuva kokusula; inekhono elinamandla lokususa ukungcola futhi ifaka ukumelana nayo; inokuzizwa okuhle, ingagezwa iphinde isetshenziswe, futhi iyonga futhi iyabiza.